သခင်ဖိုးလှကြီးကျောက်ရုပ်နှင့် ချောက်မြို့ CDM လှုပ်ရှားမှု (ဓာတ်ပုံ-ဒေသခံများ)
[ZawGyi & Unicode]
မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတဲ့လူထုကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းဖြိုခွဲနေတာတွေ ရှိနေချိန်မှာပဲ ချောက်မြို့အပါအဝင် မြန်မာပြည်အနှံ့က ရေနံမြေ ၁၃ ခုစလုံးကတော့ ထုတ်လုပ်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အကြောင်း ချောက် ရေနံမြေက စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ကျန်တဲ့နယ်မြို့တွေမှာလည်း အခုထိ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်း မခွါညိုက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ တရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့က မြို့တွေမှာ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်နေကြတာမှာ ချောက်မြို့က ရေနံမြေ အလုပ်သမားတွေလည်း CDM အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီ ဆန် ရေးမှာ တစုတစည်းတည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ရေနံမြေအရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ တဦးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ MOGE ရေနံမြေ ၁၃ ခုရှိပြီး ၇ ရက်နေ့ည ၉ နာရီမှာ အဖျောက်ရေနံမြေက CDM လှုပ်ရှားမှုစတက်လိုက်ပြီး ဆက်တိုက် ဆိုသလို ရေနံချောင်း ရေနံမြေ၊ ၈ ရက်နေ့ညနေ့မှာ ချောက်ရေနံမြေ၊ ၉ ရက်နေ့မှာ လက်ပံတိုရေနံမြေ၊ အရာတော်ရေနံမြေ၊ ကျောက်ခွက် ရေနံမြေ၊ ပထိုးလုံး၊ မအူပင် စတဲ့ လုပ်ကွက်တခုချင်း တိုးပြီး ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ MOGE ရေနံထုတ်လုပ်မှုအားလုံး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ ကြောင်း ပြောပါတယ်။
“CDM movement ကို ကျမတို့ စပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၊ ကုမ္ပဏီရော ၊ MOGE က ဝန်ထမ်းတွေရော ပေါ့နော်။ အားလုံးက ၈ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီက စပြီး လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့။ ချောက်ရေနံမြေရယ်၊ MOGE ရယ် စာရင်းအရဆိုရင် ဝန်ထမ်းက ၈၈၆ ယောက်ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ကတော့ ၁၃၂ ဦး။ အဲဒါက ချောက်ရေနံမြေတခုလုံးရဲ့ ပရောဂျက်တခုလုံးပေါ့နော်။”
အခုလို ရေနံမြေဝန်ထမ်းတွေအားလုံး တညီတညွတ်တည်း အလုပ်မဆင်းကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တစုံတရာ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဖိအားပေး အလုပ်စေခိုင်းမှုတွေ ရှိခဲ့သလားဆိုတာကို မေးမြန်းရာမှာတော့ သူက အခုလို ဖြေပါတယ်။
“CDM လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးစုံနဲ့ အလုပ်ထွက်မှာလား၊ ခွင့်သွားမှာလားဆိုတဲ့ ပရိယာယ်တွေ သုံးခဲ့တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို CDM ဆက်လုပ်ရင် အလုပ်ဖြုတ်ပစ်မယ်၊ ခွင့်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းများရင် ရက်စားမပေးဘူး။ ခွင့် ၁၄ ရက်ထက် ထပ်တက်လို့ရှိရင် အလုပ်တခါတည်းထုတ်ပစ်မယ်။ လူစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးတွေ၊ CDM လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချမယ်ဆိုတဲ့ အဲလို ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးစုံ လာနေတယ်ပေါ့။ လက်ရှိမှာဆိုရင် ၁၆ ရက်နေ့က ဝါဇီစက်ရုံကို၊ ဝါဇီစက်ရုံ ဆိုတာက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် ပိုက်ဆံထုတ်တဲ့စက်ရုံကို MOGE ရေနံမြေတခုဖြစ်တဲ့ အရာတော်ရေနံမြေက လေဘောင် (Gas) ပေးရတာရှိတယ်။ လေဘောင်ပေးရတယ်ဆိုတာက စစ်သားတွေက လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရေနံမြေက ဂက်စ် ကို အခုချက်ခြင်းဖွင့်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ အခုချိန်ထိ ဝါဇီ ပိုက်ဆံစက်ရုံကို သေနတ်မိုးပြီးပို့ခိုင်းတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးတွေက ယခုအချိန်ထိ ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့ရှင်။”
တဆက်တည်းမှာပဲ သူက အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်အောက်မှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြောင်းကို အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
“ - အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ မလုပ်ကိုင်နိုင်ဘူး။ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ လက် အောက်မှာ မလုပ်ကိုင်နိုင်ဘူး။ ပြည်သူတင်မြှောက်သောအစိုးရတရပ် မပေါ်မချင်း CDM Movement ကို လုံးဝ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းမည် မဟုတ်ကြောင်း. စတိတ်မဲန့်ထုတ်ပြီးတော့ ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေက ဒီလိုမျိုးတွေ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါက ချောက်ရေနံမြေတခုတည်း မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ စောစောကပြောတဲ့ ရေနံမြေဌာန ၁၃ ခုလုံးပါ။”
ဒါကတော့ ချောက်ရေနံမြေ အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်နေသူ အမျိုးသမီးတဦးက ပြောပြခဲ့တာပါ။ မကွေးမှာတော့ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ ဖိအားပေးမှု၊ တခြားအကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ခံနေရတာတွေကို လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ မြင်တွေ့နေရတာတွေကြောင့် ကြောက်လန့်ပြီး အလုပ်ပြန် ဆင်းကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိလာကြောင်း CDM လှုပ်ရှားမှုအပြီးတိုင်လုပ်သွားမယ့် ဆရာမတဦးက ပြောပါတယ်။
“ကျန်းမာရေးလည်းထွက်တယ်။ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအသီးသီး ထွက်ကြတယ်ပေါ့။ ဌာနပေါင်းစုံ တော်တော်များများ ပါပါတယ်။ ဘဏ်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ဒီ ၁ ရက်၊ ၂ ရက်အတွင်းမှာ ဖိအားပေးသလိုမျိုးလေးတွေ ဖြစ်လာတော့ - လိုင်းပေါ်မှာ ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေ မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ တချို့တွေလည်း ပြန်ပြီးကြောက်ကြတာပေါ့။ အထက်က လူကြီး ဖုံးခေါ် တယ်ဆိုလို့ရှိရင် သွားကြတာမျိုးပေါ့။ ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကတော့ လကုန်မှ လစာရမှာမျိုးပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာတော့ လစာနဲ့ဖြစ်အောင်စားနေကြရတာပဲ။ အနုပညာလောကကလည်း ပြန်ပြီးထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ ထောက်ပံ့မယ် မထောက်ပံ့ဘူးဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုလာမယ် မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့။”
ပုဂံညောင်ဦးဘက်မှာလည်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပြီး ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပါဝင်ဆန္ဒပြနေကြဆဲပါပဲလို့ ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ ကိုညီထက်က ပြောပါတယ်။
“လူထုကတော့ လျော့တော့လည်းမသွားဘူး။ ပုံမှန်လေး ဒီအတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဗျ။ ညောင်ဦး စီးပွါးရေးဘဏ်ရှေ့မှာတော့ ထိုင်သပိတ်တွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲ ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန် လှည့်လည်ဆန္ဒပြနေတာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ အတော်ကိုရှောင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေလည်း အဓိကကတော့ ဆရာဆရာမတွေပါတယ်။ ထွေအုပ်ကဝန်ထမ်းတချို့လည်းပါတယ်။ စည်ပင်တို့၊ မြန်မာ့မီးရထားတို့ကဝန်ထမ်းတွေလည်း တွေ့တယ်ဗျ။ များသောအားဖြင့် ဝန်ထမ်းတော်တော်များများလည်းပါဝင်တယ်။ မြို့ခံလူထုလည်း ပါတဲ့အပြင် အခုဆိုရင် ကျေးရွာတွေကပါ ပါလာတာကို တွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။”
အောင်လံမြို့မှာလည်း CDM လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်နေကြောင်း အရပ်သား၊ ဝန်ထမ်းအားလုံး ဆန္ဒပြနေကြပြီး နှောင့်ယှက်အကြမ်းဖက်မှု တစုံတရာမရှိဘူးလို့ အောင်လံမြို့က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုသူရနိုင်က ဆိုပါတယ်။
“အောင်လံမြို့နယ်ဆေးရုံကြီးရဲ့ရှေ့မှာလည်း ဆေးရုံတခုလုံး CDM လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားပါတယ်ဗျ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ အောင်လံမြို့ရဲ့ ထူးခြားချက်ပါ။ နောက်တခုကတော့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းဆရာဆရာမတွေ အင်မတန်မှ ညီညွတ်ကြတယ်။ အင်အားများတယ်။ ကျနော်တို့စစ်ကြောင်းမှာ သူတို့ အလျင်းသင့်သလို ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းချီတက်ကြပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ အောင်လံမြို့မှာ အင်မတန်မှ အားရဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တခုက သစ်တော၊ နောက် အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့။ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတွေလည်း လာပြီး ပူးပေါင်းကြတယ်။ အားအရဆုံးကတော့ ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေး”
ပေါက်ခေါင်းမြို့မှာလည်း CDM လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်သွယ်ပါဝင်သူ ဝန်ထမ်းအများစုဟာ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ကျန်းမာရေးမှာတော့ CDM လုပ်တဲ့သူက တော်တော်လေးများတယ်ရှင့်။ ကျမကို အလုပ်ဖြုတ်လည်း ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ရှင့်။ ကျမကတော့ အဆုံးအထိ တိုက်မယ့်အတွက် အလုပ်ပြုတ်မှာတွေ ဘာတွေ ထည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားမနေတော့ပါဘူး။”
အခုလက်ရှိအချိန်အထိ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းအများစုကတော့ အဖမ်းခံရမယ့်အရေးအပြင် နောက် ၁၀ ရက်အကြာ လခထုတ်ရက်မှာ လခထုတ်လို့မှ ရပါတော့မလားဆိုတာ မရေရာတဲ့အပြင် လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေကို အကူအညီပေးမယ် ဆိုတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှလည်း အဆက်အသွယ်မရတဲ့အတွက် ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာမသိသေးပေမယ့် အခုထိတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေအုံးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်ရှင်။
ချောက်ရေနံမြေအလုပ်သမားတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်
ခြောကျရနေံမွအေလုပျသမားတှေ CDM မှာ ပါဝငျ
မန်တလေး၊ မွဈကွီးနား စတဲ့မွို့ကွီးတှမှော စဈအာဏာသိမျးမှုကို ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျနတေဲ့လူထုကို အကွမျးဖကျနှိမျနငျးဖွိုခှဲနတောတှေ ရှိနခြေိနျမှာပဲ ခြောကျမွို့အပါအဝငျ မွနျမာပွညျအနှံ့က ရနေံမွေ ၁၃ ခုစလုံးကတော့ ထုတျလုပျမှုတှေ ရပျဆိုငျးသှားတဲ့အကွောငျး ခြောကျ ရနေံမွကေ စဈအာဏာသိမျးမှု ဆနျ့ကငျြရေး တကျကွှလှုပျရှားသူက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။ ကနျြတဲ့နယျမွို့တှမှောလညျး အခုထိ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနကွေဆဲဖွဈတဲ့အကွောငျး မခှါညိုက စုစညျးတငျပွထားပါတယျ။
ဖဖေျေါဝါရီလ တရကျနေ့ စဈအာဏာသိမျးခြိနျကစပွီး မွနျမာပွညျအနှံ့က မွို့တှမှော ဆန်ဒပွကနျ့ကှကျနကွေတာမှာ ခြောကျမွို့က ရနေံမွေ အလုပျသမားတှလေညျး CDM အကွမျးမဖကျအာဏာဖီ ဆနျ ရေးမှာ တစုတစညျးတညျး ပါဝငျခဲ့ကွောငျး ရနေံမွအေရေးတကျကွှ လှုပျရှားသူ တဦးက ပွောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ MOGE ရနေံမွေ ၁၃ ခုရှိပွီး ၇ ရကျနညေ့ ၉ နာရီမှာ အဖြောကျရနေံမွကေ CDM လှုပျရှားမှုစတကျလိုကျပွီး ဆကျတိုကျ ဆိုသလို ရနေံခြောငျး ရနေံမွေ၊ ၈ ရကျနညေ့နမှေ့ာ ခြောကျရနေံမွေ၊ ၉ ရကျနမှေ့ာ လကျပံတိုရနေံမွေ၊ အရာတျောရနေံမွေ၊ ကြောကျခှကျ ရနေံမွေ၊ ပထိုးလုံး၊ မအူပငျ စတဲ့ လုပျကှကျတခုခငျြး တိုးပွီး ရပျဆိုငျးခဲ့တာ ၁၀ ရကျနမှေ့ာ MOGE ရနေံထုတျလုပျမှုအားလုံး ရပျဆိုငျးသှားခဲ့ ကွောငျး ပွောပါတယျ။
“CDM movement ကို ကမြတို့ စပွီးလုပျဖွဈတယျပေါ့နျော၊ ကုမ်ပဏီရော ၊ MOGE က ဝနျထမျးတှရေော ပေါ့နျော။ အားလုံးက ၈ ရကျနညေ့နေ ၅ နာရီက စပွီး လုပျဖွဈလိုကျတယျပေါ့။ ခြောကျရနေံမွရေယျ၊ MOGE ရယျ စာရငျးအရဆိုရငျ ဝနျထမျးက ၈၈၆ ယောကျရှိပါတယျ။ ကုမ်ပဏီဝနျထမျး ကတော့ ၁၃၂ ဦး။ အဲဒါက ခြောကျရနေံမွတေခုလုံးရဲ့ ပရောဂကျြတခုလုံးပေါ့နျော။”
အခုလို ရနေံမွဝေနျထမျးတှအေားလုံး တညီတညှတျတညျး အလုပျမဆငျးကွတာနဲ့ပတျသကျလို့ တစုံတရာ ခွိမျးခွောကျမှု၊ ဖိအားပေး အလုပျစခေိုငျးမှုတှေ ရှိခဲ့သလားဆိုတာကို မေးမွနျးရာမှာတော့ သူက အခုလို ဖွပေါတယျ။
“CDM လုပျနတေဲ့ ဝနျထမျးတှကေို ခွိမျးခွောကျမှုမြိုးစုံနဲ့ အလုပျထှကျမှာလား၊ ခှငျ့သှားမှာလားဆိုတဲ့ ပရိယာယျတှေ သုံးခဲ့တယျ။ ဝနျထမျးတှကေို CDM ဆကျလုပျရငျ အလုပျဖွုတျပဈမယျ၊ ခှငျ့ယူတဲ့ဝနျထမျးမြားရငျ ရကျစားမပေးဘူး။ ခှငျ့ ၁၄ ရကျထကျ ထပျတကျလို့ရှိရငျ အလုပျတခါတညျးထုတျပဈမယျ။ လူစားထိုးမယျဆိုတဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုမြိုးတှေ၊ CDM လုပျတဲ့ခေါငျးဆောငျတှကေို ဖမျးဆီးပွီးထောငျခမြယျဆိုတဲ့ အဲလို ခွိမျးခွောကျမှုမြိုးစုံ လာနတေယျပေါ့။ လကျရှိမှာဆိုရငျ ၁၆ ရကျနကေ့ ဝါဇီစကျရုံကို၊ ဝါဇီစကျရုံ ဆိုတာက မွနျမာတနိုငျငံလုံးအတှကျ ပိုကျဆံထုတျတဲ့စကျရုံကို MOGE ရနေံမွတေခုဖွဈတဲ့ အရာတျောရနေံမွကေ လဘေောငျ (Gas) ပေးရတာရှိတယျ။ လဘေောငျပေးရတယျဆိုတာက စဈသားတှကေ လကျနကျကိုငျပွီးတော့ ခငျဗြားတို့ရနေံမွကေ ဂကျဈ ကို အခုခကျြခွငျးဖှငျ့ရမယျ ဆိုပွီးတော့ အခုခြိနျထိ ဝါဇီ ပိုကျဆံစကျရုံကို သနေတျမိုးပွီးပို့ခိုငျးတဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုမြိုးတှကေ ယခုအခြိနျထိ ကွုံတှနေ့ရေတယျပေါ့ရှငျ။”
တဆကျတညျးမှာပဲ သူက အာဏာသိမျးအစိုးရလကျအောကျမှာ အလုပျမလုပျနိုငျကွောငျးကို အခုလို ဆကျပွောပါတယျ။
“ - အာဏာသိမျးစဈအစိုးရလကျအောကျမှာ မလုပျကိုငျနိုငျဘူး။ အာဏာသိမျးစဈအစိုးရ လကျ အောကျမှာ မလုပျကိုငျနိုငျဘူး။ ပွညျသူတငျမွှောကျသောအစိုးရတရပျ မပျေါမခငျြး CDM Movement ကို လုံးဝ လုံးဝ ရပျဆိုငျးမညျ မဟုတျကွောငျး. စတိတျမဲနျ့ထုတျပွီးတော့ ကမြတို့ဝနျထမျးတှကေ ဒီလိုမြိုးတှေ သတျမှတျခဲ့တယျ။ အဲဒါက ခြောကျရနေံမွတေခုတညျး မဟုတျပါဘူးရှငျ။ စောစောကပွောတဲ့ ရနေံမွဌောန ၁၃ ခုလုံးပါ။”
ဒါကတော့ ခြောကျရနေံမွေ အကွမျးမဖကျအာဏာဖီဆနျနသေူ အမြိုးသမီးတဦးက ပွောပွခဲ့တာပါ။ မကှေးမှာတော့ အထကျလူကွီးတှရေဲ့ ဖိအားပေးမှု၊ တခွားအကွမျးဖကျနှိပျကှပျခံနရေတာတှကေို လူမှုကှနျယကျတှမှော မွငျတှနေ့ရေတာတှကွေောငျ့ ကွောကျလနျ့ပွီး အလုပျပွနျ ဆငျးကွတဲ့ဝနျထမျးတှရှေိလာကွောငျး CDM လှုပျရှားမှုအပွီးတိုငျလုပျသှားမယျ့ ဆရာမတဦးက ပွောပါတယျ။
“ကနျြးမာရေးလညျးထှကျတယျ။ ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးအသီးသီး ထှကျကွတယျပေါ့။ ဌာနပေါငျးစုံ တျောတျောမြားမြား ပါပါတယျ။ ဘဏျတှလေညျး ပါပါတယျ။ ဒီ ၁ ရကျ၊ ၂ ရကျအတှငျးမှာ ဖိအားပေးသလိုမြိုးလေးတှေ ဖွဈလာတော့ - လိုငျးပျေါမှာ ဒီလိုစကားလုံးလေးတှေ မွငျရတဲ့အခါကတြော့ တခြို့တှလေညျး ပွနျပွီးကွောကျကွတာပေါ့။ အထကျက လူကွီး ဖုံးချေါ တယျဆိုလို့ရှိရငျ သှားကွတာမြိုးပေါ့။ ဝနျထမျးအနနေဲ့ကတော့ လကုနျမှ လစာရမှာမြိုးပေါ့။ ဒီကွားထဲမှာတော့ လစာနဲ့ဖွဈအောငျစားနကွေရတာပဲ။ အနုပညာလောကကလညျး ပွနျပွီးထောကျပံ့မယျဆိုတဲ့ဟာလေးတှေ တှရေ့တယျ။ ထောကျပံ့မယျ မထောကျပံ့ဘူးဆိုတာကတော့ ဘယျလိုလာမယျ မပွောတတျသေးဘူးပေါ့။”
ပုဂံညောငျဦးဘကျမှာလညျး ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျမှုတှေ ပုံမှနျအတိုငျးရှိနပွေီး ဝနျထမျးတှလေညျး ပါဝငျဆန်ဒပွနကွေဆဲပါပဲလို့ ဆန်ဒပွပှဲမှာပါဝငျတဲ့ ကိုညီထကျက ပွောပါတယျ။
“လူထုကတော့ လြော့တော့လညျးမသှားဘူး။ ပုံမှနျလေး ဒီအတိုငျးပဲရှိနတေယျဗြ။ ညောငျဦး စီးပှါးရေးဘဏျရှမှေ့ာတော့ ထိုငျသပိတျတှေ ရှိတယျပေါ့။ ငွိမျးခမျြးစှာနဲ့ပဲ ဒီမိုကရစေီဆနျဆနျ လှညျ့လညျဆန်ဒပွနတောပါ။ အကွမျးဖကျမှုတှကေတော့ အတျောကိုရှောငျပါတယျ။ ဝနျထမျးတှလေညျး အဓိကကတော့ ဆရာဆရာမတှပေါတယျ။ ထှအေုပျကဝနျထမျးတခြို့လညျးပါတယျ။ စညျပငျတို့၊ မွနျမာ့မီးရထားတို့ကဝနျထမျးတှလေညျး တှတေ့ယျဗြ။ မြားသောအားဖွငျ့ ဝနျထမျးတျောတျောမြားမြားလညျးပါဝငျတယျ။ မွို့ခံလူထုလညျး ပါတဲ့အပွငျ အခုဆိုရငျ ကြေးရှာတှကေပါ ပါလာတာကို တှရေ့တယျခငျဗြ။”
အောငျလံမွို့မှာလညျး CDM လှုပျရှားမှု အောငျမွငျနကွေောငျး အရပျသား၊ ဝနျထမျးအားလုံး ဆန်ဒပွနကွေပွီး နှောငျ့ယှကျအကွမျးဖကျမှု တစုံတရာမရှိဘူးလို့ အောငျလံမွို့က တကျကွှလှုပျရှားသူ ကိုသူရနိုငျက ဆိုပါတယျ။
“အောငျလံမွို့နယျဆေးရုံကွီးရဲ့ရှမှေ့ာလညျး ဆေးရုံတခုလုံး CDM လုပျထားတယျဆိုပွီး ဆိုငျးဘုတျခြိတျထားပါတယျဗြ။ ဒါကတော့ ကနြျောတို့ အောငျလံမွို့ရဲ့ ထူးခွားခကျြပါ။ နောကျတခုကတော့ ပညာရေးဝနျထမျးတှေ၊ ကြောငျးဆရာဆရာမတှေ အငျမတနျမှ ညီညှတျကွတယျ။ အငျအားမြားတယျ။ ကနြျောတို့စဈကွောငျးမှာ သူတို့ အလငျြးသငျ့သလို ဝငျရောကျပူးပေါငျးခြီတကျကွပါတယျ။ ပညာရေးနဲ့ကနျြးမာရေးကတော့ အောငျလံမွို့မှာ အငျမတနျမှ အားရဖို့ ကောငျးပါတယျ။ နောကျတခုက သဈတော၊ နောကျ အရံမီးသတျတပျဖှဲ့။ လြှပျစဈဝနျထမျးတှလေညျး လာပွီး ပူးပေါငျးကွတယျ။ အားအရဆုံးကတော့ ပညာရေးနဲ့ကနျြးမာရေး”
ပေါကျခေါငျးမွို့မှာလညျး CDM လှုပျရှားမှုကိုဆကျသှယျပါဝငျသူ ဝနျထမျးအမြားစုဟာ ပညာရေးနဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ ဖွဈကွတယျလို့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတဦးက အခုလို ပွောပါတယျ။
“ကမြတို့ကနျြးမာရေးမှာတော့ CDM လုပျတဲ့သူက တျောတျောလေးမြားတယျရှငျ့။ ကမြကို အလုပျဖွုတျလညျး ဖွုတျလို့ရပါတယျရှငျ့။ ကမြကတော့ အဆုံးအထိ တိုကျမယျ့အတှကျ အလုပျပွုတျမှာတှေ ဘာတှေ ထညျ့ပွီးတော့ စဉျးစားမနတေော့ပါဘူး။”
အခုလကျရှိအခြိနျအထိ CDM လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျနကွေတဲ့ ဝနျထမျးအမြားစုကတော့ အဖမျးခံရမယျ့အရေးအပွငျ နောကျ ၁၀ ရကျအကွာ လခထုတျရကျမှာ လခထုတျလို့မှ ရပါတော့မလားဆိုတာ မရရောတဲ့အပွငျ လူမှုကှနျယကျတှမှော CDM ဝနျထမျးတှကေို အကူအညီပေးမယျ ဆိုတဲ့ဘယျအဖှဲ့အစညျးနဲ့မှလညျး အဆကျအသှယျမရတဲ့အတှကျ ရှဆေ့ကျ ဘယျလိုဖွဈမယျဆိုတာ သခြောမသိသေးပမေယျ့ အခုထိတော့ သူတို့အနနေဲ့ ဆကျလကျ လှုပျရှားနအေုံးမှာဖွဈတယျလို့လညျး ပွောကွပါတယျရှငျ။
#CDM, #MOGE #ဝါဇီ#မကွေး #ချောက် #ပေါက်ခေါင်း #အောင်လံ #ပုဂံ #Myanmar, #What'sHappening